लिगमा शीर्ष स्थानमा क्लब, तर बार्सिलोनाले निकाल्यो प्रशिक्षक भालभर्दे
शुक्रबार, असोज २, २०७७Fri, Sep 18, 2020
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २९, २०७६, ०९:५७
काठमाडौं- स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभर्देलाई बर्खास्त गरेको छ। ला लिगामा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा भए पनि सिजनको बीचमा प्रशिक्षकलाई निकालेको हो।
गएको हप्ता स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडसँग पराजित भएदेखि नै सार्वजनिक रुपमा भालभर्देको बर्खास्तीबारे कुराहरु आइरहेका थिए। बार्सिलोनाले भालभर्देको स्थानमा जाभीलाई आउन आग्रह गरे पनि उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिँदा सिजनको अन्त्यसम्म भालभर्दे नै रहने अनुमान गरिएको थियो।
केही दिन यता बिग्रिएको माहोल र नयाँ प्रशिक्षकको सार्वजनिक खोजीले भालभर्देको बर्खास्त छिटो हुन पुुगेको बताइएको छ। उनको स्थानमा रियल बेटिसका पूर्वप्रशिक्षक क्विक सेटियनलाई ल्याइएको छ।
१७ वर्षअघि मात्र बार्सिलोनाले यसरी सिजनको बीचमा प्रशिक्षक लुइस भान गालको बर्खास्ती गरेको थियो। त्यसबेला लिगमा बार्सिलोनाको अवस्था खराब थियो। यसपटक भने च्याम्पियन्स लिगमा पनि अगाडि बढिरहँदा र लिगमा शीर्ष स्थानमा रहँदा प्रशिक्षक बर्खास्त भएका छन्।
बार्सिलोनामा प्रशिक्षक भालभर्देको समय सुरुदेखि नै राम्रो चलिरहेको थिएन। ला लिगामा बार्सिलोनालाई दुई उपाधि जिताएका भालभर्देले च्याम्पियन्स लिगको खराब रेकर्डका कारण सुरुदेखि समर्थकको मन जित्न सकेका थिएनन्।
च्याम्पियन्स लिगमा गएको सिजन सेमिफाइनलमा लिभरपुलसँगको हार र त्यसअघिको वर्ष क्वाटरफाइनलमा रोमासँगको हारले चिढिएका समर्थक हरेक हारमा दोष भालभर्देलाई नै दिन्थे। जितको जस भने लियोनल मेस्सी र खेलाडीहरुलाई।
लुइस इनरिकपछि २०१७ को मे महिनामा बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बनेका भालभर्देले २०१७–१८ र २०१८–१९ को ला लिगा उपाधि बार्सिलोनालाई जिताए। एक कोपा डेल रे र एक स्पेनिस सुपर कपको उपाधिसमेत जिताएका भालभर्देको शैली बार्सिलोना चलिरहेको पुरानो शैलीभन्दा भिन्न थियो। यसैले पनि बार्सिलोनाको खेलमा अभ्यस्त दर्शक उनको शैली मन नपाएर ‘भालभर्दे आउट’ को नारा लगाउँथे।
कोरोना डर : मैदानमा शारीरिक दुरी बनाउँदा ३७-० गोल
कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गर्न भारतमा संसद् कोषको रकम, मन्त्री र सांसदको तलबभत्ता कटौती विधेयक पारित
कालिमाटी वृत्त परिसरबाट ४ संदिग्ध फरार
निको भएका २०५३२५५९
अपडेटः शुक्रबार, असाेज २, २०७७। १४:१८ बजे। स्रोत : coronavirus.jhu.edu र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
ब्वाइज युनियनमाथि बाँसबारीको नाटकीय जित बुधबार, फागुन १४, २०७६
नेपाली क्रिकेट टिमको विदाइ बुधबार, फागुन १४, २०७६
विराटलाई उछिन्दै स्मिथ नम्बर एक ब्याट्सम्यान बुधबार, फागुन १४, २०७६
कोरोना डर : मैदानमा शारीरिक दुरी बनाउँदा ३७-० गोल शुक्रबार, असोज २, २०७७
कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गर्न भारतमा संसद् कोषको रकम, मन्त्री र सांसदको तलबभत्ता कटौती विधेयक पारित शुक्रबार, असोज २, २०७७
कालिमाटी वृत्त परिसरबाट ४ संदिग्ध फरार शुक्रबार, असोज २, २०७७
कोभिड पीडितले लिए ८६ करोड पुनर्कर्जा, असोज १४ सम्म निवेदन दिन पाइने शुक्रबार, असोज २, २०७७
'मनसुन कहिले सकिन्छ भन्न सकिन्न, आइतबारपछि वर्षा कम हुन्छ' शुक्रबार, असोज २, २०७७
बजार अनुगमन हुन थालेपछि घट्यो प्याजको मूल्य बिहीबार, असोज १, २०७७
ऊर्जामन्त्री पुन भन्छन्-आजको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमान नियुक्त हुन सक्छन् बिहीबार, असोज १, २०७७
कति पाउँछन् वामदेवले अब तलब? बिहीबार, असोज १, २०७७
यात्रुको पर्खाइमा बसपार्क बिहीबार, असोज १, २०७७
प्रधानमन्त्रीमा अहंकार र अज्ञानताको डरलाग्दो कक्टेल छ : डा बाबुराम भट्टराई [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री हुन योग्य नेताको रुचि र आकर्षण राम्रो हो : गणेश तिमिल्सिना [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी अधिवेशनमा संसद्‍बाट पारित हुन्छ : मन्त्री त्रिपाठी [अन्तर्वार्ता] रासस
कोरोना संकटमै यसरी हुन सक्छ महाधिवेशन गगन थापा
शैलेश शैली : संगठन सुधार्ने प्रयास कि चर्चा कमाउने रहर? नारायण अधिकारी
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको तीन साता : ७ हजार संक्रमित थपिए शुक्रबार, भदौ २६, २०७७